Webiga Shabeelle oo deegaano ku fatahay | Baydhabo Online
Webiga Shabeelle oo deegaano ku fatahay
Wararka laga helayo, magaalada Jowhar, xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ayaa sheegaya in deegaano hoos yimaada uu ku fatahay webiga Shabeele.
Wararka ayaa sheegaya in webiga uu ku fatahay deegaanada ay ka midka yihiin Tuugaareey iyo Mandheere oo hoos taga Jowhar.
Dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada Jowhar ayaa beryahanba cabsi xoogan ka muujinayay fatahaad uu sameeyo wabiga Shabeele.
Dadka ku nool deeganada uu maro wabiga Shabeele ayaa dhawaan ka cabanayay biyo la’aan xoogan kadib markii uu wabiga guray,balse imminka waxay ka cabanayan biyo badan iyo fatahaad uu webiga sameeyo.
Webiga Shabeele ayaa mudo dhoweyd haawanayay, kadib markii biyihii ay ka dhamaadeen, iyadoo arrintaasina lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen maamulka kililka 5aad ee Soomaalida Itoobiya oo la sheegay in ay biyo xireen u sameeyeen.
Mudadaasi ayaa dadku ay aad uga cabanayeen biyo la’aanta webiga, taasi oo keentey in dalag badan uu baaqdo, iyadoo xitaa biyo la’aantaasi ay keentey in xoolaha iyo dadkaba loo waayo biyo ay cabaan deegaada qaar.
In mar kale webiga dib u soo laabto ayaa timid ayay dadku qaarkiis leeyihiin, kadib markii roobab xoogan ay ka da’een deegaanada Kililka 5aad ee Soomaalida Itoobiya, webigana uu aad u buuxiyay, deegaano uu ku fatahay, ayna qasab noqotey in biyo xireenka la fasaxo.
Maamulka Kililka 5aad ayaa horey u sheegay in ay biyo xireenka geliyeen dhaqaale xoogan, ayna xireen, si dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay uga faa’iideystaan biyaha, una soo saaraan wax soo saran ka badan sidii hore.
Durba dadka deegaanka Shabeelaha dhexe ayaa walaac ka muujiyey webiga soo buuxiyay. Iyo deegaanada cusub ee uu ku baahey.axayna dalbadeen gurmad, si bey yiraahdeen looga hortago waxyeelada ay geysan karto fatahaada.
Marka xilli roobaadka la gaaro ayaa webiga ay uu buux dhaafin jirey, kuna fatahi jirey deegaano kala duwan, isagoo saameyn ku yeelan jirey nolosha caadiga ah ee dadka, beeraha iyo isu socodka.